Home Wararka Maamulka isbitaal Madiina oo Musuq Maasuq lagu eedeeyay+Dhageyso
Maamulka isbitaal Madiina oo Musuq Maasuq lagu eedeeyay+Dhageyso
Maamulka guud ee Isbitaal Madiina ayaa lagu eedeeyay inuu ku tagrifalo Awooda,iyadoona la sheegay in si sharci daro ah uu shaqada kaga buriyay Gabar ka mid aheed shaqallaha Isbitaalka.
Siyaasiga Axmed Baasto ayaa ku eedeeyay Agaasimaha Isbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho inuu ku tagrifalo awooda Maamul,Sidookale Siyaasiga ayaa sheegay in haweney ka mid aheed dhaqaatiirta isbitaalka uu si sharci daro ah kaga buriyay shaqada Agaasime Maxamed Yuusuf oona wado musuq maasuq.
Axmed Baasto ayaa sheegay in arintaan ay gaartay Maxkamadaha dalka waxuuna xusay in ilaa afar mar ay maxkmad xukuntay Maxamed Yusuuf oo ah Agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Dhanka kale Maxamed yuusuf oo aynu isku daynay inaan la xiriirno si aaan wax kaga weydiino arinkan lagu eedeeyay ayaan ka jawaabin Taleefanka.
Previous articleMW Farmaajo oo Shir deg deg ah isugu yeeray Madaxda Maaamulka Galmudug
Next articleMareykanka oo K/Waqooyi fariin udiray
Qeeybo ka mid ah Soomaaliya oo Maanta laga sooman-yahay